Engin Arık ndiani? | RayHaber | raillynews
mushaGENERALEngin Arık ndiani?
Ndiani mukuru arik
Engin Arık (14 Gumiguru 1948 - 30 Mbudzi 2007) anga ari weTurkey particle fizikisi uye aimbova purofesa weDhipatimendi rePhysics kuBoğaziçi University. Aizivikanwa nemaonero ake ekuti Thorium mine inogona kuve yakachena uye nehupfumi mhinduro kumagetsi.
Iye akazvarwa muna Gumiguru 14, 1948 muIstanbul. Akapedza kudzidza paAatürk Girls High School muna 1965. Mushure mekugamuchira diploma yake mumasvomhu uye fizikisi kubva kuIstanbul University muna 1969, Arık akatanga kushanda semubatsiri wevadzidzi paTheoretical Physics Chigaro cheyunivhesiti imwechete.
Engin Arık akagamuchira tenzi wake dhigirii (MSc) muna 1971 kubva kuYunivhesiti yePittsburgh mumunda wekuyera yakasimba simba fizikisi (PhD) muna 1976. Musoro mukuru wekudzidza kwake kwechiremba aive maonono akaonekwa nekutumira hyperon beam pane zvakasiyana zvinhu. Somutsva-chiremba kwechiitiko kubva 1976-1979, akatora chikamu mukuyedza ongororo dzekunze Delta mafomu akatumirwa pamusoro peiyo hydrogen chinangwa kuYunivhesiti yeLondon uye Rutherford Laboratories.
Muna 1979 akadzokera kuTurkey akapinda muBogazici University Physics department. Akave mubatanidzwa wepurofesa muna 1981 nezvidzidzo zvake mumunda wekuedza yakakwirira simba fizikisi. Muna 1983, akabva payunivhesiti iyi kuti anoshanda kuDhipatimendi reDhipatimendi makore maviri uye akazodzokera kuBoğaziçi University uye akava purofesa muna 1988.
Pakati pa1997 na2000, Arık akashanda semukuru wema radionuclide kuComprehensive Test Ban Thery Organisation, sangano reUnited Nations muVienna.
Mushure ma1990, akapindawo muzvidzidzo kuCERN. Akatungamira masayendisiti eTurkey aipinda muedzo yeATLAS uye yeCAST. Arık akaburitsa anopfuura zana zvinyorwa mumunda weyedzo yakanyanya simba fizikiki uye akagashira mazana ezvinyorwa. Arık, aivawo director weTurkey National Accelerator Project, akafira mutsaona yendege muIsparta musi wa 30 Mbudzi 2007. Akavigwa muEdirnekapı Martyr's Cemetery.
Arık akange akaroora naProfessor Metin Arık, avo vaive purofesa paBoğaziçi University mudhipatimendi rimwe chete, uye vaine vana vaviri.
Inowanikwa mu-h-indekisi yakavakirwa pamishumo yeWebometric mushumo yakabudiswa muna 2014, ichiri kutanga iyo mune vesainzi kuTurkey.
Chese chekuedza yakakwira simba fizikisi isina kugumira pabasa rake mumunda weArik, iyo thorium mine zvinetso zvemagetsi zvinetso zvakawana zvakakosha matura muTurkey yakachena uye akawanikwa aine hupfumi mhinduro inogona kuve uye iyo maonero uye kushanda kwairi inofanira kuva. Nekudaro, Turorium yeTurkey uye yakawana kugona kuburitsa magetsi kana mabhirioni emabhomba akadaidzira angave akaenzana nesimba remafuta kumafuta. Cern Accelerator projekiti uye nhengo yeTurkey nekuda kwebasa rake mukuurayiwa akaiswa, ndege yakabviswa muMossad kana zvinonzi zvinogona kudzikiswa neimwe kambani yehungwaru.
Muenzaniso weBridge Bhizimisi 1.si Engin Öner
Didem Engin yeCPP yakatora basa rakaitwa muAsiayan Park kusvika pane zvinyorwa zveparamende
Engin Çakmak ku Eskişehir Vanhu Kupa Tram Mashoko Akanaka
Mutevedzeri wehurumende Bülent Arınç nomudzimai wake Münevver Arınç,
Ekrem İmamoğlu ndiani?